Darpan Nepal – महिलाहरु पुरुषसाथीसँग कसरी यौन सम्पर्क राख्न चाहन्छन्, बाहिरियो महिलाको लागि महत्वपुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन !
महिलाहरु पुरुषसाथीसँग कसरी यौन सम्पर्क राख्न चाहन्छन्, बाहिरियो महिलाको लागि महत्वपुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन !
हालसालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनलाइन टेडिङ साईडले मानिसकलाई कस्तो प्रकृतिको यौन लिला मन पर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवदेन सार्वजनकि गरेको हो ।
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ किन पनि भन्दा मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । डेटिङ साईडले अनुसार महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
यस्तै यस्तै जिज्ञाषा सोध्दा प्राप्त भएका प्रतिकृया समेटेर अनालईन डेटिङ साईडले नयाँ प्रतिवदेन सार्वजनिक गरको हो । अध्ययनका क्रममा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले यौन सम्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको जिउका रौँसँग सुम्सुम्याउँदै पाकक्रिडा गर्न मन पर्ने बताए ।
६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् । जिउका रौँ तान्नु, नियन्त्रणमा लिनु, फोहोर बोल्नु तथा जिउमा टोक्नु जस्ता व्यवहार गरेर गरिने यौन सम्पर्कलाई महिलाहरुले सबैभन्दा रुचाएको अध्ययनले देखाएको छ ।झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले सेक्सका बेला आफूलाई आफ्नो पुरुष पार्टनर अश्लील तथा छाडा भएको मन पर्ने बताए ।
Previous Postआमाको अन्त्यिष्टि हुँदै छ, उनका सानी छोरीलाई भनिदै छ ‘अहिले आउँछिन पख’,नानीलाई देखेर सबै रुदै थिए [भिडियो हेर्नुहोस ] Next Postभखरै डा. केसी बारे आयो बिश्वलाई नै रुवाउने खबर